EVY's Kitchen: ချဉ်စပ်ဟင်းချို၊ Hot and Sour Soup
ဒီတစ်ခါမှာတော့ သောက်လို့ကောင်းတဲ့ ချဉ်စပ် ဟင်းချိုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီနည်းကိုတော့ စာအုပ်တစ်ခုထဲကနေပြန်ပြီး မှီငြမ်းထားတာပါ။ ပဲပြား မှိုခြောက်တွေပါဝင်ပြီး အရသာတော်တော်ကောင်းလို့ လုပ်နည်းလေးကို ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရှီတာကီမှိုခြောက် ၅ ခု (ရေစိမ်ပြီး ပါးပါးလှီးထားပါ)
Button Mushroom ၅ခု (ပါးပါးလှီးထားပါ)
မုန်လာဥနီ အနည်းငယ် (ပါးပါးသေးသးလှီးထား)
ပဲပြားလက် ၂လုံးစာအထူခန့် ၆ ခု
ကြက်ဥ ၁လုံး + နှမ်းဆီလက်ဖက်ရည် ၁ ဇွန်း
ကြက်သွန်ဖြူ ၂ မွှာ (နုတ်နုတ်စဉ်း)
ကြက်သွန်မိတ် ၁ ပင်
ပြောင်းဖူးမှုန့် စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း+ ရေ စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ပဲငံပျာရည်အကြည် စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
ရှာလကာရည် စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း
1. ပထမဆုံး ဆီစားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်းကို ပူအောင်တည်ပြီး မုန်လာဥနီကို ဆီသတ်ပေးပါ။
2. ၁ မိနစ်လောက်နေရင် button mushroom လေးတွေကိုပါဆီသတ်ပေးပါ။
3. ပြီးရင် ငရုပ်သီးအကြမ်းမှုန့် လက်ဖက်ရည် ၁ဇွန်း နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကိုပါ ထည့်မွှေပေးပါ။
4. နောက် ကြက်ပြုတ်ရည် ၁ လီတာကိုလည်း ထည့်မွှေပေးပြီး ဆူအောင်တည်ပေးပါ။
5. ဆူရင် ကြက်သား၊ ပဲပြားနဲ့ ဟင်းခပ်အရည်များကို ထည့်မွှေပေးပါ။
6. ထပ်ဆူလာရင် ပြောင်းဖူးမှုန့်နဲ့ ရေ အရောကိုထည့်ပြီး ပျစ်အောင်မွှေပေးပါ။
7. နောက်ဆုံးမှ ကြက်ဥနဲ့ နှမ်းဆီရောခေါက်ထားတာကို ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပြီးမွှေပေးပါ။ ၅ မိနစ်လောက်ထပ်တည်ပြီးရင် သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ
Posted by Evy at 11:45 AM
မိုးလေးအေးအေးနဲ့ အရမ်းကိုလိုက်ဖက်တဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်
ချဉ်ချဉ်လေးဆိုတော့ စားကောင်းမှာ သေချာတယ်
Evy ရေ....လာအားပေးသွားတယ်နော်...Blog လေး တခုဖြစ်မြောက်သွားတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဆက်လက်အား
Another insteresting one :P
white angle said...
လာလည်သွားပါတယ်... မုန့်တွေကော၊ ဟင်းချက်နည်းတွေကော တ၀ကြီးကြည့်သွားပါတယ်...
မမ ရေ ..လုပ်စားကြည်အြုံးမယ်.. သရေောတင်ကျတယ် မမ ရယ်..
ချဉ်စပ်ဟင်းချိုဆိုတော့ ထိုင်းစာနဲ့ နီးစပ်တာပေါ့နော်။
ချက်နည်းလေးမှတ်သွားပြီ စမ်းချက်ကြည့်မယ် Evy ရေ။